Nalàna Sarona Tao Sarajevo Ny Saribe An-drindrina Mampiseho An’i David Bowie · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2016 3:32 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, русский, Italiano, Français, Español, English
Araka ny vavahadin-tserasera ao an-toerana, Clix.ba, io no “sary an-drindrina goavana indrindra eto an-tany ahitàna an'i Bowie,” 13 metatra ny haavony ary 10.5 ny sakany (43 x 34 feet).
Raha sarotra hamarinina ny amin'izay filazàna izay, tahàka ny goavana be kosa aloha ilay sary an-drindrina ao Sarajevo mitaha amin'ireo “13 Zavakanton'ny Làlana Natao Hanomezana Voninahitra an'i Bowie Eran'izao Tontolo Izao” notsongain'ny gazetiboky NME.
Ny “Team Bowie Sarajevo” dia ahitàna mpitendry mozika Vedad Trbonja avy amin'ilay tarika mpiangaly rock Billy Andol, Marvel comics artist Enes Čišić, mpamorona endrika sy mpanao hosodoko Zoran Herceg, hatramin-dry Mensur Demir, Aleksandar Brezar sy Adnan Čomor.
Nampiasain'ireo mpampiasa media sosialy ny tenifototra #SarajevoBowie mba hanehoana fankasitrahana ilay tetikasa.
Ampahany amin'ny faritra iray nampiasaina ho toby goavana indrindra nisy ny Tafibahoaka Yogoslavy ny toerana misy ilay sary an-drindrina.
Taorian'ny Ady Bosniaka, naverina namboarina ny toerana, nampiasaina tamin'ny ampahany ho an'ny anjerimanontolo, ary tamin'ny ampahany ho an'ny masoivoho Amerikàna vaovao.